Umzi-mveliso oxabisa izigidi uvaliwe kwaye usematyaleni – Ntu News
Umzi-mveliso oxabise zigidi eziqikelelwa ku-R3.5 wokuvelisa amanabukeni kunye neziqhusheki zangasese oko wavalwa susela ukwakhiwa kwawo kwiminyaka esibhozo eyadluyo kwilali iGwili gwili kuQobo-Qobo.
Lo mzi mveliso owaziwa ngokuba yi-Qingqamntwana Community Project, wakhiwa ngonyaka u-2013, iliphupha lika Mzwandile Sigwabe, olilungu lokuhlala kule lali kwinjongo zakhe zokuphuhlisa uluntu.
Imeko yalo mzi-mveliso ibangele unxunguphalo phakathi kwamalungu okuhlala ebelindele ukuzuza amathuba ingqesho. Eli cebo lokwakhiwa kwalomzi mveliso lamkelwa liSebe loPhuhliso lwezeNtlalontle kwaye labinza izigidi ukuphumelelisa eli phupha.
Iindleko zokuqala zaya ekwakheni iflethi enamagumbi amabini emva koko kwalandeliswa ngesakhiwo sokusebenzela, sakhiwo eso singekakulungeli ukwamnkela abasebenzi sithetha nje.
Isixa semali engaphezulu kwezigidi ezibini sasetyenziswa ukuthenga oomatshini kwinkampani ezinze eKapa. Nangona kunjalo izinto zokwenza imveliso imateriel ngelasemzi azikafiki ngenxa yokuba isakhiwo singekabikho kumgangatho olungele ukuqalisa umsebenzi.
Umbane wafakwa kwesi sakhiwo ngo-2017 nanjengoko ubuyenye yezinto ebangela ulibaziseko kule projekthi.
Ngokuka Lindiwe Nkonki, ovela kwiSebe loPhuhliso lweNtlalo iprojekthi iphelelwe yimali yokugqibezela isakhiwo. “Kwimali ebifakwe kweli phulo, sishiyeke ne-R5000 kuphela. Iipali zombane ezazifakwe nguEskom ziyishiye isematyaleni le projekthi, sithetha nje iprojekthi inetyala le-R9000 kwityala lombane kwaye liyakhula,”utshilo uNkonki.
Ngethuba kungeniswa oomatshini, konakaliseka umgangatho kwesi sakhiwo, kwaye lonto ithintela nayiphi na imisebenzi ibinokuqala.
Uceba wakwaWadi 3 nojongene nale lali, uMlungiseleli Ngcofe akakwazanga ukusinika ulwazi olungqongqo malunga neprojekthi. Ngokutsho kwakhe, “mna ndizokwazi ngale projekthi ngo-2016 kwaye emva koko akhonto ingako ephinde yenzeka”.
USigwabe uxelele iNTSU NEWS ukuba uceba akazange abonakalise mdla kule projekthi, phantsi kwenzame zabo zokufumana inkxaso kuye ukuze eli phupha lifezekiseke.
Abaphathi beeprojekthi bazama ukufumana inkxaso-mali engaphezulu ukuncedisa ngokwenziwa komgangatho kumzi-mveliso.
English version below available to download
← Border Rugby proposes return to action in June
A young man from adeep rural area shows gratitude to MEC of Education in the Eastern Cape →
October 15, 2020 October 15, 2020 Jaco Gangat-Duvenage	0
EC TRANSPORT DEPARTMENT AVAILS R73M TO PAY OFF DEBT
February 20, 2022 February 20, 2022 Jasmin Rose	0